सम्झना घिमिरे काठमाडौं, १० फागुन
सांसारिक लोभ, मोह त्यागेर साधु जीवन व्यतीत गरिरहेका जोगीहरूलाई पैसाको जरुरत पर्छ भन्ने सुन्दा पक्कै पनि तपाईंलाई आश्चर्य लाग्दो हो । नलाग्नु पनि किन ? जब पैसा, इज्जत, माया, मोह आदि भौतिक सुखलाई त्यागेर आत्मकेन्द्रित खुसीमा रमाउने संन्यासीहरूलाई जीवन व्यतीत गर्न सामान्य मानिसले जस्तो पैसा कमाउनुपर्ने बाध्यता छैन ।
संन्यासी बन्नुभन्दा अगाडि पनि घर, परिवार, पैसा, माया, मोह, इज्जत, प्रतिष्ठा सबैबाट टाढा हुन्छु भनेर प्रतिज्ञा लिनुपर्छ । यो संन्यासीहरूको संहिता पनि हो । तर, यस पटकको शिवरात्रिमा अर्थात् हिजो साधुबाबाहरूमा देखिएको पैसाको लोभले भने उनीहरू संन्यासी नै हुन् र ? भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ ।
शिवरात्रीकै लागि पशुपति क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै भारतबाट साधुबाबाहरू आउने गरेका छन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अनुसार यस वर्षको शिवरात्रिमा मात्रै भारतबाट ४ हजार साधुसन्तहरू आए ।
नेपाली साधुहरूको पनि उल्लेखनीय सहभागीता थियो पशुपति क्षेत्रमा । दर्शनका लागि आउने यस्ता साधुसन्तहरूमा उच्च आदर छ तर साधु भेषमा पैसा कमाउ धन्दा गर्ने साधुहरू भने साँच्चै संन्यासी साधु नै हुन् त ? भन्ने प्रश्न पंक्तिकारका मनमा उब्जियो ।
हिजो अर्थात् महाशिवरात्रिमा पशुपति क्षेत्र घुम्दै जाँदाको एउटा रमाइलो प्रसङ्ग । केही साधुबाबाहरू पशुपतिपारि मृगस्थलीमा साना मन्दिरहरूमा गफिइरहेका थिए । एउटी विदेशी पर्यटकले उनीहरूसँग फोटो खिचिन् । रमाइलो गरी पोज दिइरहेका बाबाहरूले फोटो खिचिसकेपछि ती पर्यटकसँग पैसा मागे– टुटेफुटे अंग्रेजीमा ‘मनी मनी’ भन्दै । विदेशीले नेपाली पैसा ५० रुपैयाँ बाबाको हातमा थमाइदिइन् र बाटो लागिन् ।
फेरि तिनै बाबासँग नेपाली केही केटाकेटी फोटो खिच्न थाले । सबैसँग फोटो खिचेको भन्दै पैसा मागे साधुहरूले पालैपालो । पैसा नदिएपछि एकाएक भड्किएका साधुहरूले क्यामरा ठड्याएर ठिक्क परेको मानिसको हुलमा कार्टुनका टुक्रा र सलले मुख छोप्न थाले ।
त्यसरी मुख छोपेको देख्दा अचम्म लागेर सोध्दा ‘पैसा दिनू अनि मात्र मुख देखाउँछौँ’ भने एक बाबाले । अचम्म लाग्यो, आखिर पैसा नै कमाउनुपर्ने भए, पैसाकै लोभ मोह छ भने किन बने त साधु ?
पशुपति आउने साधुलाई खाने, बस्नेदेखि यात्रा खर्च भनेरै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भेटी स्वरूप पैसा दिँदै आएको छ । तर पनि किन बाबाहरू यसरी आफैँलाई व्यापारिक वस्तुु बनाइरहेका छन् ? किन सांसारिक मोहदेखि टाढिएर अध्यात्ममा केन्द्रित साधुहरू धार्मिकस्थलमा गरिरहेका छन् त आफ्नै व्यापार ? के यी साधु साँच्चैका साधु हुन् या नाम मात्रका ?
यसो भनिरहँदा साधुप्रति प्रश्न भने पक्कै उठाएको होइन । यसरी दर्शनका लागि आएका साधुहरूमा दर्शनभाव, भक्तिभावभन्दा कमाउभाव बढी भएको देख्दा छद्म भेषका साधु त होइनन् भन्ने प्रश्न उब्जिनु सामान्य नै हो ।
यस्तै, अर्काथरी बाबाहरू पनि देखिए पशुपतिमा, जो शिवको प्रसाद भन्दै खुलेआम भाङ र गाँजा बेचिरहेका थिए । लस्करै बसेका बाबाहरू ध्यान गर्ने, धुनी जगाउने भन्दा बढी गाँजा र भाङ बेच्नमै व्यस्त देखिन्थे ।
‘बाबाको प्रसाद लेलो मात्र १० रुपये, बाबाका आशीर्वाद लागेगा’ भारतको गुहाटीबाट आएका एक बाबा कराइरहेका थिए । अर्का हेर्दा २५–२६ वर्षका जस्ता देखिने बाबा पनि नाङ्गा बाबाका तस्बीरहरू हातमा राखेर ‘बाबाको तस्बीर २० रुपैयाँ मात्र २० रुपैयाँ’ भन्दै कराइरहेका थिए ।
यी मात्रै होइनन्, मयुरको प्वाँख बोकेर ‘आशीर्वाद लिनु’ भन्दै कलिला २ जना बाबाहरू पनि पैसा कमाउ धन्दामा लागेको देखियो । साँच्चै यति सानै उमेरमा बाबा भए त ? भनेर उनीहरूसँग गफिँदै गर्दा सुरुमा हिन्दीमा बोलेका उनीहरू पछि विस्तारै नेपाली शब्द बीचबीचमा घुसाउँदै बोल्न थाले ।
भारतबाट आएका बताउने ती कलिला बाबाहरूले बोल्दै जाँदा स्कुलबाट छुट्टी हुँदा यही मृगस्थलीमा खेलेको कुरा खुस्काएको भने पत्तै पाएनन् ।
हो, यी यस्ता बाबाका भेषमा कमाउ धन्दामा लागेका बाबाहरू पनि प्रशस्तै भेट्न सकिन्थ्यो पशुपतिमा । अधिकांश बाबाहरू ‘कोही फोटो खिच, पैसा देऊ’ भन्ने कोही ‘आशीर्वाद लेऊ, पैसा देऊ’ भन्ने त कोही तस्वीर र गाँजा बेच्दै पैसा कमाउने गरेको देखियो ।
आखिर संन्यासी जीवन नै व्यतीत गर्ने बाबा किन पैसामै मरिहत्ते गरिरहेका छन् त ? किन भजन कीर्तन, ध्यान, धुनी जगाउने आदि काम गर्न छाडेर भौतिक वस्तुतर्फ आकर्षित हुँदै छन् ?
यो जिज्ञासाले म अझै रन्थनिइरहेकी छु ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन १०, २०७६, ०८:१५:००
कोरोना भाइरसको संक्रमणसँगै कालोबजारी रोक्न सांसदको माग
खरिपाटी क्वारेन्टाइनका सबैको नतिजा नेगेटिभ, १ सयब५० जना रेडजोनमा